UPDATE: Intee la kala marayaa doorashada dalka Mareykanka? & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Caalamka UPDATE: Intee la kala marayaa doorashada dalka Mareykanka? & Wararkii ugu dambeeyay
UPDATE: Intee la kala marayaa doorashada dalka Mareykanka? & Wararkii ugu dambeeyay
WASHINGTON — Musharraxiinta ku tartameysa doorashadi madaxtinimo ee shalay ka dhacday dalkaan Mareykanka ayaanan wali ku kala bixin doorashada, kaddib markii ay soo bixi weysay natiijada gobollo muhiim ah oo ay ka mid yihiin Pennsylvania, Michigan, Georgia, North Carolina, Wisconsin iyo Arizona, oo weli tirinta codadka ay ka socoto.
Doorashada Mareykanka oo meel xiiso leh mareysa